अचम्म लाग्ला तर साचो हो , विमानसँग विवाह गर्दै महिला ! - Sabal Post
अचम्म लाग्ला तर साचो हो , विमानसँग विवाह गर्दै महिला !
कोबकेलाई विमानको पखेटा र थ्रस्टहरु मनपर्छ । उनका अनुसार, यो उनको लामो दुरीको प्रेम हो । उनी विमानलाई मायाले ‘सात्स’ भन्ने गर्छिन् । जर्मन भाषमा सात्स भनेको मनपर्ने मान्छे हो । विमानलाई हेर्न उनी जतिबेला पनि विमानस्थल पुग्छिन् । उनको विमान कालिगढ बन्ने सपना छ । विमानसँग आफूलाई टाढा राख्न डराउने उनले एक विमान खेलौना किनेकी छिन् । उनी खेलौनासँग नै सुत्छिन् र सधैं आफूसँग राख्छिन् ।
कोबकोले विमानसँग प्रेम गर्छिन् । जुन एक प्रकारको व्याकुलता हो, जसमा कुनै व्यक्ति निर्जीव वस्तुको साथ प्रेममा पर्दछ । यसलाई ‘अब्जेक्टोफिलिया’ भनिन्छ । मिशेलका अनुसार, सन् २०११ मा उनी एक व्यक्तिको प्रेममा थिइन् । तर उनी त्यो प्रेममा खुशी थिइनन् । उनी भन्छिन्, ‘सात्स नै मेरो पहिलो प्रेम हो । अरु विमानभन्दा सात्स फरक छ । सात्सप्रति मेरो प्रेम अरुले बुझ्न सक्दैनन् । यात्राको क्रममा म उसलाई अझै बढी चिन्छु ।’ – एजेन्सी
कोरोना भाइरसको औषधि पत्ता लागेको अमेरिकी राष्ट्रपति…
युनिभर्सल मेडिकल कलेजका विद्यार्थीको अतिरिक्त शुल्क फिर्ता…
नेत्रविक्रम चन्द विप्लवका जिल्ला सेक्रेटरीसहित तीन जना…